ब्रुनाइ शेक्युरिटी गार्डमा या प्रहरीमा जान के योग्यता चाहिन्छ?
Thu, Oct 29, 2020 | 13:29:10 NST
जिवन कुमार गुरुङ् / इन्डियन आर्मि
प्रश्नः मेरो उमेर ३५ बर्ष भयो। म अर्को बर्ष इन्डियन आर्मिबाट अवकाश प्राप्त गर्दैछु। मैले १२ पास गरेको छु। मेरो उचाइ ५ फिट १२ इन्च छ। मलाई ब्रुनाइ शेक्युरिटी गार्डमा या प्रहरीमा जान मन छ। त्यसको लागि के के योग्यता चाहिन्छ? म जान पाउछु कि पाउदिन ?
उत्तर: कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – ब्रुनाइ सरकारको शेक्युरिटी गार्डमा ब्रिटिस गोर्खा आर्मि मात्र जान पाउने नियम छ। ब्रुनाइमा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँने ब्यबस्था छैन। ब्रुनाइमा रहेका आफन्तहरुले नै नेपालबाट आफ्नो मान्छे तान्ने चलन छ। तपाईंको आफन्त ब्रुनाइमा हुनुहुन्छ भने कोसिस गर्दा हुन्छ। अथवा तपाईंले अंग्रेजी सुधार गरेर युएईमा पिएसबिडी शेक्युरिटी गार्डमा वा आबुधावी प्रहरीमा जादा राम्रो हुन्छ। कमाइ पनि ब्रुनाइको जति नै हुन्छ।